La Ma Filaan! (Qalinkii Cabdicasiis Shidane) – IFIYE
Foolxumadii ka dhacday Muqdisho, Dawladdu waxey ka dhaxashay wajigabax iyo ceeb cirroolihii xitaa saameysay. Madaxweyne Formaajo, waxaa halkudhigyadiisii ka mid ahaa, erayo badan oo uu ku soo suuqgalay. Sida; Soomaaliya waxey u baahan tahay dib-uhishiisiin. Taasi ma dhicin. Iska dhaaf in ay dhacdee, nabarradii ayuu cusbo ku sii dhiijiyay. Bal eeg, guud ahaan, haatan waxa dalka ka dhacaya! Waxa qayladhaan yeeraya. Waxaas oo idil, waxaa masuuliyaddeeda leh, ragga taliska haya. Maanta, dadku cabsi ayey ka muujinayaan, sida Laamaha Sirdoonka iyo Garsoorka Dalka loo maareeynayo.
Qof filanayey ma jirin, in Xukuumaddu u dhaqmeyso qaab Maafiyoos ah, oo ku dhisan khaarijin iyo qas siyaasadeed. Dib-uhishiisiintii waxey isku rogtay xasirad xooggan iyo qalaanqal siyaasadeed. Waxa oday qayladhaaminaya, markaad u fiirsato, mahan wax yar. Waxa ugu weyn ee haatan laga sugayo Dowladdaan, waxaa ka mid ah in ay isbeddel jirridda ah ku sameyso heykalka Xukuumadda iyo heyadaha qaar, oo ay muujiso dabacsanaan siyaasadeed. Dhib waxaa ugu filan, wixii dhacay. Waa in ay casharro ka barataa, wixii dhacay, oo ay yareysaa hal-kudhigyadaan beenta u badan, waayo, dadku ma ahan caruur cindigooda lagu ciyaari karo. Qolyaha Dawladda ku kacsan, way sii laba jibbaari doonaan sawaxanka, iyaga oo ka faa’iideysanaya mashaqadii Maafiyooska aheyd ee dhacday.
Musuqaa la la diriraa, dadbaa la hishiisiinayaa iyo nabad iyo nolal baan wadnaa, ma waxey isku rogtay in ay Dowladdu ku mashquusho xisaabxir siyaasadeed iyo ugaarsi qofeed?!
Nin xogogaal ah, ayaa wuxuu ii shiday filim cabsi miiran ah. Ku ye:- “Howlgalkii hoogga xambaarsanaa, ee Muqdisho ka dhacay, waxaa loo fuliyey, qaab u eg qaabkii loo dilay Hoggaamiyihii Alqaacida ee mayalka adkaa, Usaama bin Laadin, oo madaxda dalku Dayaxgacmeedka ayey ka la socdeen howlgalkii la fuliyey.” Dabcan, wuu ka yara badbadinayey, laakiin, wixii meesha ka dhacay, waxey ahaayeen wax aad iyo aad u foolxun, oo fildaran.
Haggaan wanaag ma ahan in maanta na loo soo koobbiyeeyo akshimada filimada Hillywoodka Mareykanka. War dalkaan taagta daran, yaan laga dhex fulin ciyaaraha Mukhaabaraadka. Wax yar oo dhisan ayuu u yimid Madaxweyne Formaajo, wixii wax ka sii qurx badan ayaa loo ga fadhiyaa. Murqamuujinta iyo istooxaarintu, waa ka xaaraan siyaasadda iyo hoggaanka.
Fan iyo Fikirad (Qeybta 2-aad)